TOAMASINA : Miantso fiaraha-miasa matotra amin’ny vahoaka ny kaomisera Rafaliarivo Jules
Ny alatsinainy 18 desambra lasa teo, nisy ny tafa fohy tamin’ny mpanao gazety nifanaovan’ny Kaomisera Rafaliarivo Jules, izay sady kaomandin’ny Fip Toamasina. 21 décembre 2017
Nandritra izany no nanaovany antso avo amin’ny vahoakan’i Toamasina mba hifanome tanana amin’izy ireo ho famongorana ireo mpanao ratsy.
Tsy vitan’ny polisy samirery mantsy, hoy izy ny fametrahana fandriam- pahelamana maharitra ao Toamasina fa ilàna fifanomezan-tanana eo amin’ny rehetra. Ny mponina eny ifotony no tena mahalala ny zava-misy eny anivon’ny fokontany tsirairay. Omeo vaovao ny Fip ahafahanay miady misimisy hatrany amin’ireo mpanao ratsy, hoy ny Kaomisera Rafaliarivo Jules.
Antso izay tonga amin’ny fotoana ilàna azy tokoa. Niverina nafampana indray mantsy ny tsy fandriam-pahalemana ao Toamasina tato ho ato. Ny alin’ny talata 19 desambra, dia tompon’andraikitry ny arofenitra eo anivon’ny Faritra Atsinanana no nisy nandrava sy nidaroka tao Ambolomadinika. Ity farany izay naratra ary mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny Hopitaly Be.